चौथो स्टेजको क्यान्सरसँग जुधिरहेका ५ वर्षका छोराले आमालाई सोधे, ममी हामी घर कहिले फर्किने ? गीताको थामिएन आँशु – Nepali Taja Khabar
बन्दिथ जम्मा ५ वर्षका भए । उनलाई क्यान्सर भएको थाहा छैन । सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अस्पताल भर्ना भएका छोराले गम्भिर प्रकृतिको क्यान्सरसँग जुधेको टुलुटुलु हेरेकी आमा गिताले सम्झिइन्की भक्कानिन थाल्छिन् । गिताका आँखामा शाँसु भरिएको धेरै भयो । आमाका आँशु हेर्दै छोरा बन्दिथले भन्छन् ममी हामी घर फर्किने कहिले हो ?
बाल्यकालदेखि नै राजयोग लिएर ठूला हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, कहिलै हुँदैन धनको कमी ,धेरै मानिस आफ्नो राशि पढेर आफ्नो जीवनमा हुने घटनाका बारेमा पूर्वाअनुमान लगाउने गर्दछन्। कयौँ पटक त राशिमा लेखेको कुरा साँचो हुने गर्दछ।
आज हामी केही यस्ता राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसको भाग्यमा राजयोग लेखेको हुने गर्दछ। अर्थात यी व्यक्ति राजाको जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी जन्म लिएका हुन्छन्।
धनु राशिका व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन्। यस्ता राशिका व्यक्तिमा पैसा कमाउने इच्छा निकै तिब्र हुने गर्दछ। यिनीहरु बाल्यकालदेखिनै धनी हुने गर्दछ।
घरबार बि’ग्रेकाहरुका पछि लागेर अन्तरवार्ता लिँदै भा’इरल बनेका सन्तोष देउजालाई प’त्निले गरिन् यस्तो गु’नासो
एउटा युवतीलाई दुई जना युवकले नै मेरो श्रीमती हो भन्दै एकसाथ मिडियामा आएपछि, एकै साथ बिहेको फोटो देखाउदै दुईं जनाले नै खोले यथार्थ ..(भिडियो सहित
आमाछोराको अ’नैति’क स’म्बन्धबाट आमा भईन् गर्भवती भएपछि…